Ọrụ Wikipedia kwalitere ndị obodo Taiwan dị Otu narị bụ ndị nke na-asụ asụsụ Sakizaya ma na-edebanye na Wikipedia · Global Voices n’asusu Igbo
Ọrụ Wikipedia kwalitere ndị obodo Taiwan dị Otu narị bụ ndị nke na-asụ asụsụ Sakizaya ma na-edebanye na Wikipedia
Ndị okenye, iji nkanụzụ ọgbara ọhụụ bụ nsogbu , ndị amaghị asụ asụsụ , ide ya bụ nsogbu
Translation posted 22 July 2020 8:22 GMT
Ndị Sakizaya . Ihe ngosi si na Youtuubu
Na ọnwa Novemba n'afọ 2019, ndị otu Wikipedia na-asụ asụsụ Sakizaya language nọ na Taiwan nwetara ihe onyinye dị ebube , onyinye a bụ idenye asụsụ nke ha ma nwee otu nke ha na Wikipedia.
E nwere mmadụ narị abụọ, iri iteolu na iteolu bụ ndi otu Wikipedia nwere asụsụ narị abụọ iri iteolu na iteolu. Sakizaya Wikipitiya, dịka esi akpọ ya n'asụsụ Sakizaya , ka ọ dị ugbu a e nwere ihe odide dị otu puku, nari asaa, iri ise na iteolu. 1,759 bụ nke mmadụ iri anọ debara na Wikipedia.
Dịka njirimara Wikipedias niile, ọdịrị onye ọbụla ọmasịrị ka ọdebanye maọbụ gụọ ihe ndi edere ede. Ọrụ Wikipedia metụtara ndezi ihe ederede dị iche iche, ịde ọtụtụ ihe mmụta dị iche iche, nakwa ime ntụgharị ederede dị iche iche dị n'asụsụ bekee gaa n'asụsụ ndị ọzọ dị iche iche.
N'afọ 2007 Gọmenti nke obodo Taiwan maara naanị Sakizaya people site n;ụdị asụsụ ha na-asụ. Ihe dịka afọ otu narị na iri abụọ na iteolu a maara ndị otu a dika ndị Amis . Ihe kpatara nke a bụ maka na ndị otu Sakizaya bidoro zowe njiri mara ha ka mechara devastating battle ha ndị otu Qing na ngwụcha 19th Century. Ndị otu Sakizaya kpọrọ ọgụ a “Takubuwan Battle”.
Ka ọdị ugbu a ndị otu nọ obodo mepere emepe ndị a, akpọrọ Keelung, Taoyuan City, New Taipei, nakwa Hualien County.
Ọnụ ogụgụ ha dị 985 as of January 2020.
N'okpuru bụ obere ihe nkiri gbasara mmalite otu ndị Sakizaya bụ nke ndị The Council of Indigenous Peoples: chịkọtara.
Iji nwee mmuta banyere mmụba na uto nke Sakizaya Wikipedia nakwa mmemme niile nke ọgbara ọhụụ so ya, Otu Rising Voices kpọtụrụ Lami Tsai-Wei Hung, otu n'ime ndi na-ebeba ederede na Wikipedia bụkwa onye na-agụ akwukwọ iji nweta nzere PhD na ngalaba Department of Ethnic Relations and Cultures nke National Dong Hwa University dị na Taiwan.
Lami nyere aka ịkwado otu Sakizaya ma chịkọta site na ego nkwado nke Gọọmenti Taiwan wepụtara. Nke a gosiri ajụjụ ọnụ ajụrụ ya nakwa azịza ya.
Rising Voices (RV): Kedụ ọnọdụ asụsụ Sakizaya ugbu a ma kedụ ka ese eji ya na ndụ ndị mmadụ kwa ụbọchị na agụm akwụkwọ nakwa mgbasa ozi nke midia?
Lami Tsai-Wei Hung (LH): Gnyere asụsụ isii ndị ọzọ dị n'obodo Taiwan, Sakizaya bụ otu n;ime asụsụ na anwụ anwụ dika otu by UNESCO si kwuo. Iji kwado nchọpụta ha , Ethnologue, akwụkwọ ntụzi maka asụsụ ndị dị ndụ n'ụwa niile, kewasịrị asụsụ a dika n’ ụdị n'ụdị nke a pụtara ahaziela asụsụ a n'ụdị na enwere ike isụ ya ma n'ụlọ ma na mba. Mana nnwale Ethnologue nwere ikeọ gaghị egosicha ọnọdụ ya .
2020 statistics gosiri na e nwere ihe dika mmadụ nari iteolu,iri asatọ na ise denyegoro aha ha ibụ ndị otu Sakizaya , ndị na-asụ asụsụ Sakizaya dị ihe dika narị ise na iri iteolu, ndị na-etonyite etonyita amụtala asụsụ a site n'aka ndị okenye. Ọtụtụ ndi Okenye Sakizaya gbara afọ iri ise na ise na-asụ asụsụ a were were mana ndị ntorobịa bi n'obodo mepere emepe amachaghị asụ asụsụ a.
N'agbanyeghị na enweghị ụlọ ọrụ onyonyo maọbụ nke redio na Sakizaya, Taiwan Indigenous TV (TITV) nakwa FM96.3 Alian Radio na eji asụsụ dị iche iche nke gụnyere asụsụ wee na-akọwapụta ihe di iche iche. Mana ndị isi na-agụpụta ihe ndi agbachala afọ iri isii ma biakwa ha enweghi ndị ntorobia na-ege ha ntị.
Ndị Gọọmenti achọpụtala mkpa ọdị iji asusụ ndị obodo nakwa asụsụ Mandarin gbasaa ozi n'obodo. Nke mere ka atụmatụ ndị gọọmeti masị ndị obodo ma kwalite asụsụ mana nke a anaghị enyere ịkpalite mmụọ ndị obodo ịsụ asụsụ ndi a.
RV: Ị nwere ike ịkọwara anyị ka esi eji asụsụ Sakizaya eme nkuzi na ọmụmụ akwụkwọ?
LH: Anyị nwere iwu metụtara Kọrịkulọm gbasara asụsụ anyị maka nwata akwụkwọ ọbụla bido na gradi nke mbu ruo gradi nke iteolu, Nke a metụtara ịmụ asụsụ masịrị gị tụmadị ọbụru na onye ga-akụzị ya nọ ya otu awa kwa izu ọbụla. Nwata akwụkwọ chọrọ imụ Sakizaya, ụlọ akwụkwọ ga-achọta onye nkuzi ga-akuzi ya. Ka ọdị ugbu a , e nwere ndi nkuzi iri na ise na ụmụ akwụkwọ iri isii na-amụ asụsụ Sakizaya n'ụlọ akwụkwọ Primari nakwa Junịọ Sekọndiri n'obodo Taiwan niile.
RV:Ederede Wikipedia n'asụsụ ọhụụ ga-abụ ihe nhịahụ nye ndi otu a n'ihi Wikipedia chọrọ ederede ebipụtara ebipụta n'akwụkwọ akụkọ, nakwa akwụkwọ ọgụgụ ndị ọzọ dị iche iche. Kedụ ihe dị iche iche ị wepụtara iji mee ka amata maka Sakizaya Wikipedia ?
LH: Ụfọdụ ndị na-eme ederede na-eme ntụgharị omenaala obodo China na nke asụsụ bekee edere na Wikipedia dee ya n'asụsụ Sakizaya. Nke a na-eme ka ọrụ ederede a dịịrị ha mfe n'ihi na ha ga eji ebe nsinweta edere n'asụsụ Chinese nakwa nke bekee gosipụta ebe ha nweta ihe ha dere. N'aka nke ọzọ ụfọdụ na-esi na ensiakolopidia enweta ihe odide di iche iche tụmadị nke metụtara mkpọrọọgwụ obodo anyị. Nke bụ ụzọ abụọ ndị otu anyị na- agbaso iji bee oge nkenke mgbe ha na-eme ihe ederede ndị a. Ụfọdụ na-aga n'ihu baa n'ịntanet mee nchọpụta site na Google, YouTube, akwukwọ ọkụkọ na ederede nke ndi mahadum bipụtara iji dee maka ụfọdụ ihe ederede na adighị na Wikipedia. Ụfọdụ ederede ndị a metụtara ndị na-atụ bọọlụ basket,akwụkwọ egweregwu ntọchị, egwuregwu na ihe nkiri nke ndị Amerika maọbụ ihe ọbụla masịrị ha. Ndị okenye nwere nghọta banyere omenaala,ọdịnaala,na akụkọ banyere ndị Sakizaya na-emekwa ihe ederede ka ike ha ya mgbe ụfọdụ ha na enweta enyem aka ndị ntorobia tụmadị n'ihe gbasara ịntaneti.
RV: Ndị na-eme ederede a ha di ole ? kedụ otu ha si gba mbọ? E nwere ebumnuche gbasara ebe na ihe ga-ebebanye na Wikipedia?
LH: Ugbu a anyị nwere mmadụ iri atọ bụ ndị nke na-edebanye ihe ederede na Wikipedia.Iri n'ime ha bụ ndị nkuzi na ndị nkwado ji ego nkwado Gọọmenti wepụtara wee na-akụziri ma na-akwado ndị na-eme ihe ndenye a. Mụ na Tuku wepụtara usoro ihe nkuzi a gbasara Sakizaya bụ nke gbagoro afọ abụọ eji bido ya. Agba nke mbụ ga-akwụsị n'afọ 2020. Iji mee ka na-agbasi mbọ ike ma na-eme ihe ndenye kwa ọnwa enwere nkwekọrịta ihe nrite iji gbaa ha ume ma ha na-ede asụsụ ha. Ndị nke ọzọ fọdụrụ bụ ndị izizi bidoro iji asụsụ Sakizaya eme ndenye ihe na Wikipedia na Wikimedia Incubator.
RV: Enwere ihe atụmatụ na-aga n'ihu banyere ọria nje korona ugbu a iji mee ka ndi mmadụ mata maka ọrịa a akpọrọ COVID-19 (coronavirus) na Sakizaya Wikipedia?
LH: COVID-19 bụ nnukwu mmọnwụ agaghị eleghara anya n'ihi na Mbunuche otu onye na-akwado ihe nkuzi na odide Sakizaya bụ ime ya ka ọ bụrụ ụzọ obibi ndụ anyị ugbu a.Anyị hubere ma wepụta usoro nkuzi asụsụ a na klasi anyị. Anyị ebipụtala ihe odide abụọ gbara COVID-19 entries— COVID-19 na “satebuc nu kitakit” (catastrophes worldwide).
RV: Gwa anyị olile anya n'ọdị n'ihu banyere ndị otu a.
LH: Anyi ga-agba mbọ ịmụba ederede anyị site na-ija ndị na-eme ederede a ike, Mana ọbụgjhị na-asụ asụsụ a maara ụtọasụsụ metutara asụsụ Sakizaya , iji Kọputa nakwa usoro ndebanye ihe na Wikipedia.
Na-agbanyeghị na ndị nwere kọputa ma mara eji ya eme ndebanye na Wikipedia amachaghị asụ asụsụ a, ụfọdụ na enwe ihe nhiaahụ ime ndebanye a ma nwekwa ohere mee ihe ndị ọzọ dịrị ha.Ọ bụ nke a mere nji buru n;obi iwepụta atụmatụ nzukọ, nkuzi nakwa asọmpi banyere idebanye ederede na Wikipedia bụ nke aga-ebido n'ọdị n'ihu. A ga-ewepụta ebe nkuzi n'ọnụ obodo asaa ka ndị okenye na ndị ntorobia biakọta ọnụ mee ndebanye a. Ndị ntorobia nwere ike depụta ihe na Chinese, ma jụọ ndị okenye ka ha tụgharịa ihe odide n'asụsụ Sakizaya, maọbụ ndị okenye ekwupụta ya n;ọnụ ebe ndị ntoroọbia ga-edebanye ya. Ebumnuche anyị bụ na ndị ntoroọbia nwere ike otu ụbọchị jiri aka ha mee ndebanye ndị a.
Anyị na-akwado iji uru soshia midia wetere wee bawanye ndị otu anyị. Ọmụmaatụ anyị ga-ekwupụta otu isiokwu na Fesibuku kwa ọnwa ka ndị na-asụ asụsụ a sonye wee mee ndebanye Sakizaya na Wikipedia. Anyị nwere olile anya na nke ga-eme ka ha sonye ganye na anyị enweta ndi nkwado.
RV: Kedụ ka usoro i si chọọ ka ndị otu ndebanye ihe na Wikipedia nakwa ndị otu ndị ọzọ di iche iche si Taiwan na obodo ndị ọzọ rụkọrịta?
LH: Dịka asụsụ Sakizaya na Wikipedia ka dị na Inkubetọ, Anyị na ndị ‘Center for Aboriginal Studies nke ndị Mahadum National Chengchi na-arụkọ, nke a na-enyere nwata akwụkwọ ọbụla na-amụ asụsụ ọdịnaala ime projekti na asụsụ nke ha maọbụ masịrị ya na Wikimedia Inkubetọ. Anyị kpọtụkwara ndị Wikimedia Taiwan, bụ otu Wikimedia dị n'ime obodo. Otu a nakwa otu Wikimedia Taiwannyere anyi nkwado site na enyem aka n'ihe gbasara igwe tekniụzụ nakwa iza oku mgbe ọbụla anyi nwere ihe nhịa ahụ. Otu abụọ ndi a ka na-enye anyị nkwado rue taa.
Nuwatan o Kumud, otu n'ime ndi okenye na Sakizaya kwuputara maka nhịaahụ na mbọ ọ na-agba iji mụta ka esi edenbanye ederede na Wikipedia ma na-agba ndị ntoroọbia na-asụ Sakizaya ume ka ha sonye n'otu a. O okwuputara ihe ndi a na an audio message.
N'okpuru ị ga-agụ ozi a bụ nke Buting Nukay na Miku Kumud tugharịrị ma depụta.
Nwayọ Nwayọ, A mụtara m ka esi ede nakwa ka esi edebanye ihe na Wikipedia [entries]. Ihe niile m dere bụ ihe m chere na ekwesịrị idetu ma dobe. Ndị a metụtara nzọ ụkwụ na ihe niile gbasara obibi ndụ ndị be anyị. Achọrọ m idetu ha niile na Wikipedia…A mam na ị ga-emenwu ya—-Mmụta m mụtara idenye ederede na Wikipedia [entries] site na iji nke akpọrọ mouse n'ihu Kọmputa, ọ bụrụ na m ga-emenwu ya ndị ntoroọbia ọbara ,aka na ụbụrụ na-anụ ọkụ agaghị enwe nsogbu na ị me ndebanye na Wikipedia..
This post is from Olu ndị na-ebilite ebilite, a Global Voices project that helps spread citizen media to places that don't normally have access to it. All Posts
Ọwụwa Anyanwụ Eshia
Olu ndị na-ebilite ebilite